Uyikhetha njani iMgcini yeScreen kwiWindows 8
I-famotidine 40 mg ithebhu
Izikrini zanamhlanje zekhompyuter azisenangxaki yokutsha, kodwa abantu basasebenzisa iiseyvesithi kuba zijongeka zipholile. IWindows 8 iza nezikhuseli ezininzi ezakhelweyo kwiscreen.
Ngeentsuku ze-dinosaur zekhompyuter, abagadi beekhompyuter babanengxaki ukutshisa: Umonakalo osisigxina xa inkqubo esetyenziswa rhoqo isitshisa umfanekiso wayo kwiscreen. Ukuthintela ukutshisa ngaphakathi, abantu bafaka iscreen sokungena kwiscreen esingenanto okanye imigca yokuhamba.
Ukuzama enye yeesakhelo ezakhelweyo kwiscreen, landela la manyathelo:
1Cofa ekunene kwi-desktop yakho kwaye ukhethe ubuNtu ukuvula iwindow yobuqu. Emva koko ukhethe ikhonkco lokugcina iScreen kwikona esezantsi ngasekunene kwefestile.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yababini bokugcina iZikrini.
i-calculator yethamo lokubala elongezelekayo
MbiniCofa utolo olukhomba ezantsi kwibhokisi yogcino lwekhusi kwaye ukhethe umgcini wekhusi.
Emva kokukhetha isilondolozi sesikrini, cofa iqhosha lokujonga kuqala lophicotho. Jonga uninzi lwabagqatswa ngendlela othanda ngayo ngaphambi kokwenza isigqibo.
Qiniseka ukuba ucofe iqhosha leSeto kuba ezinye iiseyibrowser zinika ukhetho, zikuvumela ukuba uchaze isantya somboniso wesilayidi, umzekelo.
3Ukuba unqwenela, yongeza ukhuseleko ngokukhetha i-On Resume, Display Logon Screen check box.
Esi sikhuselo sigcina abantu bangangeni kwiikhompyuter yakho ngelixa ulanda ikofu. Yenza iWindows ibuze iphasiwedi emva kokuvuka kwimowudi yokugcina isikrini.
4Xa ugqibile ukuseta isikhuseli sakho sesikrini, cofa u-Kulungile.
IWindows igcina utshintsho lwakho.
Ngaba ikhona i-generic yokubuyisela kwakhona
Ukuba u ngokwenene ufuna ukwandisa ubomi bokubonisa kwakho (kwaye ugcine umbane), ungazikhathazi ngabasindisi bekhusi. Endaweni yoko, beka ikhompyuter yakho ukuze ulale ngaphambi kokuba uhambe: Cinezela iWindows + mna ngekhibhodi, cofa i-Power icon, kwaye ukhethe ukulala kwimenyu ephumayo.
ukuseta iidesktop ezikude windows 10
ungakopa njani uncamathisele kwi-chromebook
Abantu be-ketamine bayakhangela
Ngaba iprozac ikwenza wozele
Ngaba i-tizanidine inokukuphakamisa